Manana olana ny marika lehibe, manana vahaolana ny pear | Martech Zone
Manana olana ny marika lehibe, manana vahaolana i pear
Alatsinainy, 22 Jona, 2015 Talata, Jona 23, 2015 Douglas Karr
Na labiera, sakafo na serivisy, dia mihamaro ny olona mahita ireo vokatra sy serivisy kalitao ilain'izy ireo eo an-toerana. Miaraka amin'ny sakafo fotsiny dia tombanana ho izany marika lehibe iray no namoy ny 18 lavitrisa $ mahery amin'ny varotra any amin'ny toeram-piompiana sy trano fisakafoanana eo an-toerana. Ankoatra ny olana ara-kalitao, ny mpanjifa dia maniry ihany koa ny hahatsapa fa ny dolara laniny dia manisy fiovana lehibe kokoa eo amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Marketing ara-tanjona ary ny marika ara-tsosialy dia nanjary toerana iraisana satria ny 80% n'ny mpanjifa mino fa zava-dehibe ny hampahafantaran'ny orinasa azy ireo ny ezak'izy ireo hamahana ny olan'ny fiarahamonina. Orinasa iray fampiasam-bola amin'ny fiarahamonina eo an-toerana lasa metric manan-danja kokoa noho ny fivarotana, ny tapakila na ny tapakila fahitalavitra manaraka.
Ny marika lehibe dia mampifanaraka sy manova ny fifantohany amin'ny varotra mba hifandraisana misy dikany amin'ireo mpanjifa manome lanja ny fifamatorana tena izy. Nanoratra momba ny orinasa iray izahay izay niasa mba hanomezana izay ilain'izy ireo tao amin'ny paositra miteraka marketing. Ny marika lehibe koa dia mitodika any fanentanana amin'ny marketing eny ifotony izay mampifandray ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary mahatratra ny mpanjifa amin'ny sehatra tena manokana.
Ny olana, mazava ho azy, dia ny fomba ahafahan'ny orinasa mahita, mitantana ary miantoka ny fahombiazana amin'ny ezaky ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Ny ankamaroan'ny orinasa goavambe dia tsy manana ezaka haparitaka amin'ny vondrom-piarahamonina rehetra ary manao soa… dia tonga izany poara hanampy azy ireo hitantana an'io!
Ny pear dia manamora ny fanohanan'ny vondrona sy ny hetsika amin'ny endriny sy habe. Mitadiava mpanohana iray latsaky ny 60 segondra ary ampidino ny vondrom-piarahamoninao mba hanangona $ 1,000 na mihoatra amin'ny lobaka, fanomezana vola, vokatra ary serivisy na sakafo sy sakafo avy amin'ny marika nasionaly na orinasa eo an-toerana akaiky anao.
Fandinihana tranga pear
Etazonia finday manome vola ho an'ireo fikambanan'ny tanora eo an-toerana toy ny ekipa Little League. Ireo ekipa ireo dia afaka mahazo hatramin'ny $ 9 isan'olona ho takalon'ny fidirana amin'ny US Cellular amin'ny alàlan'ny fifandraisana nomerika sy sosialy voafaritra. Fandresena fandresena ho an'ny marika roa sy ireo vondrona mpanjifa nokasihiny.
Ny vondrona eo an-toerana dia mahazo ny fanampiana ilainy ary ny US Cellular dia mijanona ho loha laharana ho an'ny fianakaviana rehefa manombana ireo mpitatitra tsy misy tariby. Ny marika lehibe dia mila manao fifandraisana misy dikany amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary mahatratra ny mpanjifa amin'ny sehatra tena manokana raha manantena ny ho tafavoaka velona sy hiara-mivelona amin'ny mpanjifa manao fieritreretana… poara dia vahaolana lehibe.
Tags: fanentanana marikamiteraka marketingvarotra eo an-toerana orinasapoarampanohana any an-toeranapearupasa soatanjona marketing